Iintlanzi zikaMtyholi: Iimpawu, ukuvelisa kunye nokunyamekela | Ngeentlanzi
Njengezinye iintlanzi ezicocekileyo ezantsi njenge intlanzi yekati okanye iintlanzi ze-otocinclus ecoca iglasi, namhlanje siza kuthetha ngenye intlanzi ecoca iitanki zentlanzi. Imalunga nayo intlanzi kasathana. Igama layo lenzululwazi ngu IHypostomus plecostomus kwaye yeyomyalelo weSiluriformes. Ikwaziwa kananjalo ngegama leentlanzi ezifunxa i-algae, ukucoca iglasi, amatye okusela, iglasi yokufunxa okanye iglasi ukufunxa
Kweli nqaku siza kugxila ekuyichazeni ngokucokisekileyo le ntlanzi kwaye sazise lonke ukhathalelo oludingayo ekuthinjweni. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngeentlanzi zikaMtyholi? Qhubeka ufunde 🙂
2 Umbala, umzimba kunye nokuziphatha
4 Ukuzaliswa kweentlanzi zikaMtyholi
6 Unonophelo oluyimfuneko ekuthinjweni
Xa ukwindalo, unokulinganisa ukuya kuthi ga kwiisentimitha ezingama-40 ubude, kodwa basekuthinjweni akuhlali kudlula kwiisentimitha ezingama-30. Umzimba wayo ucwecwe kwindawo yomqolo we-ventral, ngelixa i-dorsum igobe kwaye igqunywe ngamacwecwe e-bony. Indawo zangasemva kunye necaudal fin azigutyungelwanga ngamacwecwe emathambo.
Inxalenye engaphambili yomzimba ingunxantathu ukumila kwaye iphelela kwi-oval apho ine-caudal peduncle. Intloko, njenge-dorso-ventral axis, icabalele.
Ngokubhekisele emlonyeni wayo, imi emazantsi kwaye unayo ezinye iibarb ezincinci ezikuvumela ukuba unamathele kwiiglasi ukusuka kwiitanki zentlanzi ukuthatha ukutya. Banokuncamathela ematyeni ukufunxa ukutya. Umlomo wayo luhlobo lokutsala kwaye uyasebenza nakwi-anchor ngokwayo ematyeni nakwii-log kwaye ungatsalwa xa ikhoyo ngoku iphezulu.
Umphetho wokuqala wokumisa mkhulu ngokungathi yiseyile yenqanawa. Eyesibini incinci xa ithelekiswa neyokuqala. Inomsila ophelileyo kunye nomphetho we concave. Oku kunceda iintlanzi zikaSathana ukuba zihambe ngokukhawuleza kwimigama emifutshane ukuba zibalekele kumarhamncwa. Isiphelo sempundu sincinci ngelixa i-pectoral kunye ne-ventral zifana neebhleyidi ngenxa yendlela eziphuhliswe ngayo.
Umbala, umzimba kunye nokuziphatha
Umzimba wayo umbala omdaka ngebala kunye namanye angqukuva amnyama. Intloko nayo inamabala amnyama. Kuxhomekeka kwindidi, kukho ezinye iisampulu ezinombala omnyama emzimbeni wonke.
Esi sihlambululi setanki leentlanzi asinazo izikali, kodwa sikhusela umzimba waso ngeebhali zetyathanga kunye nasemqolo. Iintsiba zisetyenziselwa ukuzikhusela kumarhamncwa okanye zilwe nemizekelo yeentlobo ezifanayo. Inobomi obude ngaphezu kwezinye iintlobo zeentlanzi, eza kuphila ukuya kuthi ga kwiminyaka eli-15.
Ngokumalunga nokuziphatha kwayo, yintlanzi yasebusuku. Ihlala ifihliwe emini. Ngokuqhelekileyo ithule kwaye ayizukubangela iingxaki kwezinye iintlanzi. Nangona kunjalo, iya kuba yindawo enkulu kunye neentlanzi ezisezantsi kunye nezo zohlobo olufanayo.
Intlanzi yomtyholi inako ukuhlala ixesha elide emanzini. Nokuba uhamba ngayo. Iimeko zeentlanzi zikaMtyholi ziye zaxelwa ukuba Baye bahlala ukuya kwiiyure ezili-14 ngaphandle kwamanzi.
Bayakwazi ukuphefumla umoya ngenxa yesisu esiguquliweyo. Inkulu kwaye inciphile, ke ukuba isilwanyana siqala ukudada ngokuthe nkqo, siya kuba nakho ukuphefumla umoya.
Le ntlanzi ifumaneka kuMbindi nakuMzantsi Merika. Inokufumaneka kumazwe afana ICosta Rica, iUruguay, iPanama, iColombia, iVenezuela, iEcuador kunye neGuyana. Banokufumaneka kwiAmazon Basin, ngakumbi kuMlambo iOrinoco.
Ngokubhekisele kwindawo yayo yokuhlala yendalo, ikhetha imilambo kunye nemisinga amanzi ayo anokuhamba okuphakathi ukuya ngokukhawuleza. Aboyiki imisinga eyomeleleyo kuba banokubamba ematyeni ngomlomo wabo wokuncanca. Iimpawu ezihlala emanzini azolileyo ziye zarekhodwa.
Ukuzaliswa kweentlanzi zikaMtyholi
Ufikelela ekuvuthweni ngokwesondo xa ifikelela kuma-30-40 cm ubude. Kuthatha malunga nonyaka ukufikelela kobu bungakanani. Ukuzalisa, ezi ntlanzi zimba iigalari ezijikelezileyo ezindongeni apho umhlaba ungumbumba ngakumbi kwaye uthambile. Kulapho bafaka khona amaqanda.
Ngenxa yolu hlobo lokuziphatha, phantse kube nzima ukuba bazalele ekuthinjweni kwitanki leentlanzi. Nje ukuba owasetyhini abeke amaqanda, iyagxothwa kwimingxunya yindoda. Ngamanye amaxesha kukho ubundlongondlongo kwinxalenye yendoda. Kwaye luxanduva lwabo ukukhathalela amaqanda. Kukho ezinye iintlanzi, ezinje nge intlanzi yotyando, ongaphathanga ngokuhoya abantwana babo.
Ukutya kwakho igcwele ngokupheleleyo, nangona ekhetha indawo yemifuno ngakumbi. Lubonakala ngokutya ubulembu obuzikhukulayo kumphezulu wamatye okanye ezinye izinto. Ukongeza, inokutya ukutya ukutya kweentlanzi, nokuba ziqala ukubola.
Kusebusuku xa beshiya iindawo zabo zokuhlala bekhangela ukutya. Bavame ukunamathela kwiingodo ezincinci ezisezantsi ukususa iselulosi kwaye batye kuyo ukuze bacole ukutya kwabo.
Unonophelo oluyimfuneko ekuthinjweni
Kulabo bafuna ukuba neentlanzi zikaMtyholi kwi-aquarium yabo, kuya kufuneka uthobele uluhlu oluthile lokhathalelo. Iyahambelana nezinye iintlobo zeentlanzi zasemanzini. Ayikhathaleli kakhulu ezinye iintlanzi, kuba zigcinwa kwizimali. Ukuba kufunyenwe isampulu yodidi olunye, iya kuba ndlongondlongo kakhulu. Ufuna indawo yokuqubha kamnandi.
Ufuna itanki elinokubamba phakathi kwama-200 nama-300 eelitha ubuncinci. I-substrate kufuneka ibe yirravel erhabaxa kwaye imihombiso ayinakukuthintela ukudada ngokuzolileyo.
Iimeko zamanzi kufuneka zibe yi-alkaline, kodwa zibe nzima. Ubushushu bamanzi kufuneka ube phakathi kwama-22 nama-30 degrees ukuze zihlale zikwimeko entle. Ukuveliswa kwakhona kwezi ntlobo akunakwenzeka ngelixa usekuthinjweni.
Njenge-clownfish, itya i-algae kunye nokunye ukutya okufihliweyo kwi-substrate. Ifuna ukutya kwentlanzi yasemhlabeni kunye nemifuno ukuze ikhule kakuhle.
Ngolu lwazi unokukhathalela iintlanzi zikasathana kwitanki lakho leentlanzi. Ngokubuyisa unokuba namazantsi etanki acocekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi zikaMtyholi